'ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ပိုးမမှီသာကို သရုပ်ဆောင်သင်ပေးနေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု - TheeSayChin
ခင်ပွန်းက မရိုပေမယ့်လည်း စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်း
မိုးကြိုးပစ်ခံရတဲ့အခါ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အချက်(၁၀) ချက်
ဝိန့်စိန် ကြော်ငြာ ဓါတ်ပုံလေးတွေကို ဝေမျှ ပေးလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
လူငယ်လေးလို နုပျိုလှပမှုတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိ လှနေတဲ့ ခင်ဇာခြည်ကျော်
ဦးနှောက်ထဲ ချစ်ပ်ပြားဖောက်ထည့်ပြီး စမတ်ဖုန်းနဲ့ လှမ်းချိတ်ဖို့လုပ်နေတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်
‘ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ပိုးမမှီသာကို သရုပ်ဆောင်သင်ပေးနေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
July 11, 2019 Min Yar Zar	0 Comments အနုပညာ
နိုင်ငံကျော် မင်းသမီးလေး ပိုင်ဖြိုးသုက သရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံသာမက သူမရဲ့အလုပ်ကို စိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့ အာရုံစိုက် လုပ်ကိုင်သူ တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ “သရီးဂဲလ်” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ အကယ်ဒမီဆုကြီးကို ထိုက်ထိုက်တန်တန် ဆွတ်ခူးရရှိထားတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသုက လက်ရှိမှာတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်နေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုင်ဖြိုးသုက “မီ” ဆိုတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နဲ့လည်း ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အပြည့်အဝ ရရှိထားသူလေး ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုင်ဖြိုးသုက လက်ရှိမှာတော့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မယ့် “ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအတွက် ပိုးမမှီသာကို သရုပ်ဆောင်သင်ပေးနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က “ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ ရုပ်ရှင်အတွက် Training လုပ်ပေးနေတဲ့ မမသုသု… Thank you Paing Phyo Thu for coaching our new actress Poe Mamhe Thar” ဆိုပြီး ပိုင်ဖြိုးသုအတွက် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောထားပါသေးတယ်။
“ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ မီးပွားက ရိုက်ကူးပုံဖော်မှာ ဖြစ်ပြီး ဂီတနောက်ခံ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အကယ်ဒမီ မင်းသမီးချော ပိုင်ဖြိုးသုကတော့ ပိုးမမှီသာကို သူမရဲ့ ပညာတွေကို အကုန်ထုတ်ပြီး သင်ကြားပေးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ။ ဒီ “ပိတောက်ကတဲ့ဂီတ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကလည်း သင်္ကြန်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။ Rowena Source: Sai Sai Kham Leng”s fb
← ကြိမ်နှုန်း ဇာတ်ကားကြီး Red Carpet Show ကို အနက်ရောင် Dress လေးနဲ့တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဘောလုံးသမားကြီးမက်ဆီကို နောက်ကောက်ချလိုက်တဲ့ အဆိုတော်မလေး တေလာဆွစ်ဖ် →
အကယ်ဒမီ ဝတ်မှုန်ရွေရည်ဝတ်ဆင်လာတဲ့ ဝတ်စုံက Fashion Star Award ဆုကို ရရှိ
April 5, 2019 Min Yar Zar 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရုံတင်ပြသတော့မယ့် X-Men: Dark Phoenix ရုပ်ရှင်
May 26, 2019 Min Yar Zar 0
နေတိုးနဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်တို့ အပြိုင်အဆိုင်သရုပ်ဆောင်ထားကြတဲ့ “နှစ်ပါးသွား Update” ရဲ့ Official Trailer
July 8, 2019 Min Yar Zar 0
July 24, 2019 Min Yar Zar 0
Zawgyi Font ဖြင့်ဖတ်ရန် တရုတ်မလေးလိုမျိုး ချစ်စရာကောင်းလွန်းနေတဲ့ မင်းသမီး သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာ ရှိပြီးသားပါပဲ။ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကတော့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့် အနုပညာလုပ်ငန်းတွေကို မလုပ်ကိုင်ဖြစ်တော့ပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေကတော့ သူနဲ့သူ့မိသားစုကိုတော့ အားပေးနေကြတုန်းပါပဲ။ သဉ္ဇာနွယ်ဝင်းကလည်း
လူတိုင်း လူတိုင်း အိမ်မှာ ဒါမျိုးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိကြပါစေနဲ့။ (တန်ဖိုးရှိတဲ့ သိမှတ်စရာတွေပါ)
အဖြစ်ဆိုးလိုက်တာ သားလေးရယ်. . နောင်ဘ၀မှာ နွေးထွေးတဲ့ မိသားစုဘ၀လေး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ
” အ၀တ်ဗလာနဲ့ ရေချိုးနေတဲ့ ပုံတွေတင်လိုက်တဲ့ မော်ဒယ်နန်းမွေစံ “
ရွှေတောင်မြို့တွင် ရည်းစားကိုအလုပ်ထုတ်လို့ဆိုပြီး ဆိုင်ရှင်အား ဓါးနဲ့ ဝင်ခုတ်
သူတို့အရွယ်လေးတွေမှာ ညအချိန်မတော်ကြီး အဲဒီချိန်ဆိုအိမ်မှာလုံလုံခြုံ ခြုံ နဲ့စာကျက်ရနေရမဲ့အချိန်ဗျာ…!
အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားရေးတွေပြေလည်ပြီး စားဝတ်နေရေးတွေ ပြေလည်နေကြပြီဆိုတာ ဒီအချက်တွေကြောင့်ပါ
သူငယ်ချင်းအတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေရှာတဲ့ ဝေဠုကျော်
အွန်လိုင်းသုံစွဲသူတွေကြား ရေပန်းစားနေတဲ့ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် တရားသူကြီးမလေး
ဆရာဝန်တွေတောင် အံ့သြခဲ့ရတဲ့ ခေါင်းသုံးလုံးပါတဲ့ ကလေးတစ်ဦးမွေးဖွား (ဗွီဒီယိုဖိုင်)
Copyright © 2019 TheeSayChin. All rights reserved.